Real Madrid oo noqotay kooxda lixaad ee faa’iidada ugu badan ka heshay suuqa kala iibsiga – Gool FM
Real Madrid oo noqotay kooxda lixaad ee faa’iidada ugu badan ka heshay suuqa kala iibsiga
Kaafi February 8, 2018
(Madrid) 08 Feb 2018. Warbixin ayaa la soo daabacay bidhaamineysa celis celiska dhaqaale ee ay kooxaha waa weyn ee Europe sameeyeen, Real Madrid waxa ay ka gashay kaalinta lixaad marka la eego kuwa faa’idada ugu badan sameeyey.
Warbixinta waxa ay muujineysaa halka kooxaha ka joogaan dhaqaalaha marka la eego iibka iyo soo iibsashada ay suuqa ka sameeyeen.
Sida laga soo xiganayo CIES Football Observatory, Real Madrid faa’iido ayey sameeysay marka la isku cel celiyo dhaqaalaha soo galay iyo kuwa ka baxay waxa ayna noqoneysaa 47 million euros oo fa’ido ah.
Barcelona iyada qasaaro ayey gashay oo u noqonaya -170m euros.
Xavi oo ka tilmaamay kooxda gacanta sare yeelan karta kulanka Real Vs. PSG
Herrera oo maxkamad ka soo muuqan kara